November 4, 2020 1017
सिन्धुपाल्चो:कका सुजन बाबु गुरुङको जीवन केहि दिन’अघिसम्म सामान्य थियो । आफ्नो गाउने कलालाई दबाउँदै उनी दैनि:क बुढानिल’कण्ठ रत्नपार्क रुटको गाडी चालकको रुपमा आफ्नो जीविको चलाउँदै थिए । त्यसैबिच २३ बर्षका सुज:नको जीव:नमा ठुलो परिवर्तन आयो, जब उनको बारेमा थाहा पाएर कला’कार सँचारकर्मी शिशिर भण्डारी उनको प्रति’भाको भिडियो बनाए ।
११ बर्षको उमेर’मा गरिवीले पिरो:लेपछि काठमाडौंमा आएर अनेकौं सँघार्ष गरेका सुजनको जीवन कथाले सबैलाई रुवायो र उनको कलाले सबैको मन लोभ्यायो । सबैको माया पाए:पछि शिशिरले पहिलो अन्तर्वा’र्तामै गरेको बाचा पुरा गरे ।
उनले सुजन को गीत रेकर्ड गराए र भिडियो सहित बजा:रमा ल्याए । अहिले गीतको चौतर्फी चर्चा छ । सबैले गीतको शव्द र सँगीत सँगै गायक गायिकाको आवा’जको ता:रिफ गरेका छन् । सुजन सँगै रचना रिमालले गीत गाएकी छिन् भने शिशिर भण्डारी आफै’ले शव्द र सँगीत भरेका छन् ।
यसैबिच बस चाल’क सुजन बाबू गुरुङ भाई:सँग बसमै शताव्दिकाको नजर जुद्छ, भाईको बोली र बानीले युवती मोहि’त हुन्छिन् र उनीहरु बिच प्रेम बस्छ । सधै गाडी चढ्ने क्रममा माया बढ्दै जान्छ ।
यो सुजन भा’ईको दोस्रो गीत ‘एक झल्को’को कथा हो । कसरी बस्छ प्रेम ? के उक्त प्रेम सफल हुन्छ ? गी’तको छायाँकन कसरी भयो ? सुजनले हालसम्म कति गीत गाए ? सुजन र शताव्दि’कासँगको कुराकानी हेर्नुस…. ( ताजा खबर)
Prevदुःखद खबर- कृष्ण बहादुर महरालाई पत्नीशोक, महरा पत्नी सीताको नि’धन
Nextआज नेपालमा सुनचाँदीको भाउ घट्यो कि बढ्यो ? हेर्नुहोस्…
बढ्यो डलरको भाउ, अन्य मुलुकको मुद्राको भाउ पनि बढ्यो
मलाई बखतले मोहनी मन्त्र लगाएर लगेको रहेछ ” भन्दै रोइन् प्रतिभा (भिडियोसहित)
नेपाली सेनाका जर्नेललाई यौ’नका’ण्ड, जागिरबाटै बर्खा’स्त
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (50976)